सिमानामा प्रहरीलाई पैसा तिरेर नेपाल आउँदै भारतीय नागरिक ! – Namaste Dainik
सिमानामा प्रहरीलाई पैसा तिरेर नेपाल आउँदै भारतीय नागरिक !
August 2, 2020 August 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सिमानामा प्रहरीलाई पैसा तिरेर नेपाल आउँदै भारतीय नागरिक !
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न जिल्लामा कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिएको स्थानिय तहले निष्कर्ष निकालेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । भारतवाट आएकाहरुमा कोरोना देखिने दर बढि छ । नेपालमा अहिले देखिएका कोरोना संक्रमित बाहिरवाट आएकाहरुमा बढि देखिएको छ । तर अहिले समुदायमै कोरोना फैलिएको छ ।
यसको सबैभन्दा बढी असर कैलालीमा परेको देखिएको छ । कैलालीमा सुरक्षा निकायकै संरक्षणमा सीमा नाकाबाट धमाधम भारतीय नागरिक नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टिन नबसेरै पेशा व्यवसाय गर्न थालेको भन्दै स्थानियले गुनासो गरेका छन् । नेपालमा अहिले पसल ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छ । यातायात साधन पनि छोटो दुरीमा चल्न थालेका छन् ।
ब्यवसाय सञ्चालन गर्न भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गरेका हुन् । सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा विभिन्न उद्योग, ग्यारेज, वर्कसप तथा कपाल पसलमा काम गर्दै आएका भारतीय नागरिकबाट रकम असुलेर परीक्षण बिनै सुरक्षाकर्मीले नेपाल आउन अनुमति दिने गरेको स्थानियले बताएका छन् ।
भोली रक्षाबन्धन अर्थात जनैपूर्णिमा : के भनि डोरो बाँध्ने ….???
यि हुन् प्लास्टिक सर्जरी गरी ओभरनाइट चर्चामा आएकी बलिउड अभिनेत्री मौनी रोय, जसको हातमा छन् फिल्म नै फिल्म
नेपालगंज देखि दाङ जाँदै गरको एम्बुलेन्स दुर्घटना, सुत्केरी र एक दिनको नवजात शिशु सहित ११ जना घा;इते
July 18, 2020 Namastedainik
३ अर्ब २० करोडमा विनोद चौधरीले किने साउदी राजकुमारको होटेल।
बिहानसम्म बिरामी जाँचेका डाक्टरनै कोरोना संक्रमित,चेक गरायका बिरामी त्राशमा।